10 Iingcebiso ngokuHamba koSapho eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iingcebiso ngokuHamba koSapho eYurophu
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 31/12/2021)
Iholide yosapho eYurophu inokuba yinto emnandi kubazali nakubantwana bayo yonke iminyaka ukuba ucwangcise kakuhle. IYurophu ngumhlaba iinqaba kunye iibhulorho, iipaki eziluhlaza eziluhlaza, kunye noovimba apho amantombazana aselula kwaye amakhwenkwe angazenza amakhosazana kunye neenkosana imini yonke. Nazi iindlela ezinkulu zokunyuka intaba kunye neendawo ezininzi zokuzonwabisa kwindawo entle engaphandle, kodwa ukuhamba nabantwana kunzima.
Ukusuka ekucwangciseni ukupakisha, siyile isikhokelo sokugqibela kuhambo losapho olwaphuphayo. Landela nje yethu 10 Iingcebiso ezilungileyo zeholide yosapho eYurophu ukuqinisekisa uhambo losapho oluhle.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye wenziwa ngu Gcina A Isitimela, Amatikiti oololiwe abiza kakhulu kwihlabathi.
1. Iingcebiso ngeeholide zosapho eYurophu: Fumana abantwana bakho babandakanyeke
Imfihlelo kwikhefu losapho olukhulu kuxa usapho lonke lusemgodini kwaye bonwabile. IYurophu izele kakhulu lwimi emangalisayo, iindawo ezinika umdla zotyelelo, Iipaki zokuzonwabisa, neendawo zokundwendwela, kwaye ukuthatha inxaxheba kwabantwana bakho ekucwangciseni uhambo lwakho oluya eYurophu kuya kujika kube liholide lamaphupha. Yenza uphando lwakho kwangaphambili, khetha umtsalane ofuna ukutyelela, kunye namabala abantwana bakho baya kuthanda, emva koko ukhethe abantwana 3-4 Umtsalane kuluhlu. Ngale ndlela wonke umntu wonwabile kwaye unento ajonge kuyo yonke imihla.
AmaBrussels aya kumaxabiso oololiwe eAmsterdam
London to Amsterdam Train Amaxabiso
Amaxabiso eBerlin ukuya eAmsterdam
Amaxabiso eParis aya eAmsterdam
2. Hlala kwi-AirBnB
I-Airbnb ibiza ixabiso eliphantsi, ngakumbi ngasese, kwaye uziva ekhaya, ebaluleke kakhulu kubantwana xa ukude nekhaya. Airbnb lukhetho olukhulu lokuhlala kusapho lwaseYurophu kuba iihotele eYurophu zibiza kakhulu, Nditsho nesivumelwano sakusasa. Ukuhlala kwa-Airbnb kukunika ikhitshi lokupheka, isidlo sasemini-sokuhamba, kunye nexesha lesidlo sakusasa xa unokuxoxa ngosuku.
kwakhona, kukho indawo eninzi kunye nemfihlo yabantwana nabazali, ukuphumla emva kosuku olude luhlola.
UFlorence uya eRoma amaxabiso oqeqesho
AmaNaples aya eRoma amaxabiso oololiwe
UFlorence waya ePisa amaxabiso oLoliwe
IRoma ukuya eVenice Amaxabiso oQeqesho
3. Iingcebiso ngeeholide zosapho eYurophu: Phuma kwiziko lesiXeko esiXakekileyo
IYurophu izele yolondolozo lwendalo ebukekayo kunye neepaki zesizwe, ngemizila yokunyuka intaba kunye neepikniki. Ubungangamsha bendalo eYurophu buchaphazeleka kangangokuba nokuba uhamba nabantwana abancinci, usenakho ukuphonononga iingxangxasi kunye neendawo zokujonga.
Uninzi lweepaki luyafikeleleka nge train isuka e amaziko esixeko esikhulu. Ukuba ucwangcisa kwangaphambili kwaye uzilungiselele, akukho sizathu sokuba ungonwabi ngaphandle nangaphandle kwaye wonwabele umoya omtsha, amahlathi, kunye neepaki ezinomxholo.
EMilan ukuya eRoma amaxabiso oqeqesho
IPisa ukuya eRoma amaxabiso oqeqesho
4. Bhukisha ukuHamba kwakho
Ukwazi indlela yakho yokujikeleza indawo yelinye ilizwe kubalulekile xa uhamba nabantwana. Awufuni kulahleka kwaye ujikeleze isixeko ngeenyawo okanye uhambe kwisikhululo seenqwelomoya, nokuba injani na imo yezulu. ngoko ke, Ukucwangcisa kunye nokubhukisha iindlela zakho zothutho eYurophu kuya kukuthembisa ngeholide yosapho enkulu.
Uthutho loluntu lunokuthenjwa kakhulu kwaye zikhululekile eYurophu. Zininzi iindlela zokuhamba ngaphakathi nangaphandle kwamaziko esixeko. Ukuhamba ngololiwe kunye netram zilungile nabantwana kuba unokufikelela kuyo yonke indawo, thintela ukugcwala kuhlahlo-lwabiwo mali lohambo lwakho.
Xa kuthelekiswa ukuqesha imoto kunye nokuchitha ixesha elininzi ukhangela indawo yokupaka okanye ujonge nje endleleni, ungonwabela ukukhwela kunye nokutya okulula, xa Qeqesha ukuhamba nabantwana eYurophu. Enkulu Uncedo lokuhamba eYurophu nabantwana ngololiwe kukuba abantwana bahamba simahla nge-Euro kaloliwe.
AiSmsterdam kuLoliwe amaXabiso oLoliwe
Amaxabiso eParis aya eLondon
Amaxabiso eBerlin ukuya eLondon
AmaBrussels ukuya kumaxabiso oLoliwe waseLondon
5. Iingcebiso ngeeholide zosapho eYurophu: pack Light
Ehamba Izikhululo zikaloliwe zaseYurophu ngabahambahambayo kunye neesutikheyisi ezinkulu kunokuba ngumceli mngeni. Ezinye izikhululo zikaloliwe azizukubanezinyusi okanye izinyusi ezinyukayo, ke kungcono ukupakisha kunye nokukhanya kokuhamba. Qiniseka ukuba upakisha istroller esongwayo kunye nokuqhubeka, Ngale ndlela ukuba abantwana badala ngokwaneleyo, banokuphatha eyabo imithwalo.
ngaphandle, ukupakisha ukukhanya kuthetha ukupakisha zonke izinto ezifunekayo kuhambo losapho. Ngaloo ndlela, ukugcina abantwana bexakekile kuloliwe ekhwela kunye nezinto zokubala imibala, Iincwadi ezimanyelwayo, okanye ixesha lokujonga ikhathuni kwi-iPad, uya kuba luncedo olukhulu.
EMunich ukuya eSalzburg amaXabiso oLoliwe
EMunich ukuya ePassau amaXabiso oLoliwe
ENuremberg ukuya ePassau amaXabiso oLoliwe
ISalzburg ukuya ePassau Amaxabiso oLoliwe
6. Ukutya kunye nabantwana eYurophu
Kufuneka uyazi ukuba iivenkile zokutyela eYurophu aziboneleli ngokutya kwabantwana, ke ngabantu abadala’ izabelo zomntu wonke. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba uqaphele umzekelo ukuba undwendwela e-Itali, awuyi kufumana ubungakanani bepitsa yabantwana okanye iinxalenye zepasta, Zilungiselele.
kodwa, akufuneki udle uphume. Enye yeengcebiso zethu zokuhamba nabantwana baseYurophu kukuba Iipiknikhi zosapho. Kuninzi esele kuthethiwe malunga neepaki zaseYurophu kunye nendalo ngenxa yokuba umhlaba oluhlaza ocacileyo wenzelwe ukusingatha ipikniki yosapho lwakho. Thatha amaqebengwana, iziqhamo ezintsha, kunye nemifuno kwintengiso yendawo kwaye ulungele ipikiniki yesidlo sasemini. Amaxabiso kwiimarike zeefama axabisa kakhulu kuneevenkile ezinkulu kunye neeresityu. Ngaphezulu kwayo yonke into, khawucinge nje ngeembono oza kuzonwabela ngazo zonke i-bite enye kwaye ngokupheleleyo simahla.
EMunich ukuya kwiZurich Amaxabiso oololiwe
Amaxabiso eBerlin ukuya kwiZurich
I-Basel ukuya kwiZurich Amaxabiso oLoliwe
IVienna ukuya kumaZiko oLoliwe amaZurich
7. Iingcebiso ngeeholide zosapho eYurophu: Iphenyane kunye noKhenketho lokuHamba ngokuSimahla eYurophu
Ungazenzela ngokwakho ngemephu kunye neencwadi kunye neeapps, kodwa ukujoyina isikhephe okanye uhambo lokuhamba yeyona nto ilungileyo. Kwizixeko ezininzi zaseYurophu kukho ukhenketho lwesixeko simahla ngesikhokelo sendawo. Esi sikhokelo sichwayitileyo siza kubonisa kwaye sixelele iimfihlo zesixeko ezigcinwe kakuhle, ngaphandle kokuba ulahleke ezitalatweni ’maze. Isikhokelo siya kuthi sibonise iivenkile zalapha ekhaya kunye neeseti zesidlo sasemini kwaye sinike elona cebiso lililo kwinto ekufuneka yenziwe esixekweni.
IYurophu izele imijelo kunye nemilambo, ukuze a ukhenketho lwesikhephe lolunye ulonwabo kunye nendlela eyahlukileyo yokuhamba kunye nokuphonononga. Iya kuba yimincili ebantwaneni kwaye uphumle wena.
I-Interlaken ukuya kwiZurich Amaxabiso oLoliwe
ILucerne iya kwiZurich Amaxabiso oLoliwe
UBern ukuya kwiZurich Amaxabiso oQeqesho
IGeneva ukuya kumaZiko oLoliwe amaZurich
8. Yenza ixesha lokuKhwela ngeCarousel
Uninzi lweedolophu zaseYurophu ziya kuba ne-carousel eqaqambileyo nenobuhle kwi isikwere esikhulu sedolophu. Endaweni yokubalekela kwindawo elandelayo, yeka, kwaye vumela abantwana ukuba baqhubeke nokukhwela kangangoko bafuna. Ukonwabela ukukhwela i-carousel xa i-Eiffel Tower ilapha emva kwakho, Ngumzuzu ongalibalekiyo kubantwana abaselula kunye nabantu abadala.
IAmsterdam ukuya eParis Amaxabiso oLoliwe
London to Paris Train Amaxabiso
IRotterdam ukuya eParis Amaxabiso oLoliwe
AmaBrussels ukuya eParis Amaxabiso oLoliwe
9. Iingcebiso ngeeholide zosapho eYurophu: Yenza ixesha lokuba "Oops"
Kungenxa yokuba useSwitzerland, akuqinisekisi ukuba yonke into izakuhamba kakuhle kuhambo lwakho losapho. Xa uhamba nabantwana, yonke into ingenzeka, naseYurophu, so be sure to leave time for oops on the trip. Make time for unplanned surprises, ukulibaziseka, Utshintsho kwizicwangciso enkosi kwii-kiddos ezinomsindo, ubekhona kwaye ulungele ukulungelelanisa.
ISalzburg iya eVienna Amaxabiso oLoliwe
EMunich ukuya eVienna amaXabiso oLoliwe
I-Graz eya eVienna Amaxabiso oqeqesho
Prague ukuya eVienna Amaxabiso oLoliwe
10. Bonisa abantwana baseYurophu ngaphandle kwendlela ebethiweyo
Enye yeengcebiso zethu eziphezulu zokuhamba nabantwana ibabonisa indlela yokwenza ukuhamba kwindlela ebethiweyo eYurophu. Kulumkele ukubakho kwezikwere, imigca yejelato, imifanekiso yosapho, ngokubasa kwezo ndawo zifihlakeleyo, iilali ezintle, kunye nendalo engaqhelekanga.
Abantwana bathanda iintsomi kunye nokuzonwabisa, ke ubase kwezo ndawo iintsomi zenziwe ngazo. Yindlela elungileyo yokuchitha ixesha elisemgangathweni kunye, wenze okona kulungileyo kwiholide losapho eYurophu, kwaye ubafundise malunga nenkcubeko etyebileyo kunye nembali yaseYurophu.
IYurophu yindawo enkulu yeholide yosapho nangaliphi na ixesha lonyaka. Nokuba ulusapho olufuna i-adventure okanye onomdla wokubona indawo kunye neemyuziyam, IYurophu inayo yonke. Ukwengeza, IYurophu inobuhlobo bosapho xa kuziwa kwezothutho kunye nokupasa kwesixeko esikhethekileyo. Wethu 10 Iingcebiso ezilungileyo zeholide yosapho eYurophu ziya kuba luncedo olukhulu xa ucwangcisa uhambo lwakho olulandelayo okanye lokuqala ukuya kwilizwe leenqaba kunye neentsomi..
EMilan ukuya eVenice amaXabiso oLoliwe
IPadua ukuya eVenice Amaxabiso oololiwe
I-Bologna ukuya kumaxabiso oololiwe eVenice
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda uceba iholide intsapho ifanelekileyo eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iingcebiso ezili-10 eziLungileyo kwiiholide zosapho eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-family-vacation-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha i / ja ukuya / es okanye / de kunye neelwimi ezininzi.
Europewithkids familyholiday familytrip Familytripeurope familyvacation traintravelwithkids
Ndingumbhali onomdla, Umhambi ohamba yedwa kunye neblogger. Ndiyakholelwa ukuba ulwimi kunye namagama zizixhobo ezinamandla ezinokukhuthaza kunye nokwenza iihlabathi elitsha. Ndiyakuthanda ukuhamba kunye nokwabelana nohambo lwam ngamabali am nabanye abafazi kwihlabathi liphela - Unako cofa apha ukuze Qhagamshelana nam
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Train Travel Holland, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Uhambo loLoliwe, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
10 Kanye kwiiNdawo zoBomi
12 Indawo ezigqibeleleyo zokuQala zabahambi
12 IiNdawo eziGqwesileyo zohambo lwamantombazana kwihlabathi liphela
12 Uninzi lweeTempile zaMandulo kwihlabathi liphela
12 Iindawo ezingcono kakhulu zabathandi bezodwa